काे हुन राष्ट्रियसभामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिमिल्सिना?
काठमाडाै । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना निर्वाचित भएका छन । एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागी उम्मेदवारी दिएका तिमिल्सिना निर्विराेध निर्वाचित भएका हुन ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका स्थायी बासिन्दा तिमिल्सिना एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेश नं ४ का सहसंयोजक हुन । फागुन २८ गते राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका तिमिल्सिनालार्इ अाजकाे बैठकले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकाे हाे । राष्ट्रियसभाका ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले तिमिल्सिना अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तिमिल्सिनाको प्रस्तावकमा एमालेकै खिमलाल भट्टराई र समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दिनानाथ शर्मा तथा एमालेकै सुमनराज छन ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा जन्मिएका थिए । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्रवीणता तहमा अध्ययन गर्दै गर्दा विसं २०३६ मा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनुभएका तिमिल्सिना पर्वतको मोदी गाउँपालिका–७ मा विसं २०१८ जेठ १२ गते जन्मिनुभएको हो । गाउँकै पशुपति उच्च माविबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरेका तिमिल्सिना विद्यार्थी जीवनदैखि नै प्रगतिवादी सोचका साथ विसं २०३६ मा नेकपा (माले)को रेडगार्डको सचिवसमेत भएका थिए । विसं २०३७ मा अनेरास्ववियुको क्षेत्रीय सम्मेलनबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय समितिको सदस्यमा निर्वाचित तिमिल्सिनाले विसं २०४० मा तत्कालीन मालेको सदस्यता प्राप्त गरे ।
पार्टी राजनीतिको शुरुवातसँगै सक्रिय राजनीतिमा उनी विसं २०४१ मा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सचिव र विसं २०४२ मा अनेरास्ववियुको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको सदस्य भए । तत्कालीन सरकारविरुद्ध विद्रोहको उद्घोष गर्दै विसं २०४२ को बम काण्डपछि चार वर्ष जेल जीवन बिताउनु परेकाे थियाे । तत्कालीन सरकारले विसं २०४२ देखि ०४६ सम्म लगातार चार वर्ष तिमिल्सिनालाई पोखरा, भैरहवा, तौलिहवा, वीरगञ्ज, भद्रगोल जेल र नख्खु जेलमा राखेको थियो ।
उहाँसँगै जेलमा कम्युनिष्ट नेता केपी शर्मा ओली र हितकाजी गुरुङ पनि थिए । विसं २०४६ मा जेलबाट छुटेका उनले प्रजातन्त्र बहालीको आन्दोलनमा पुनःसक्रिय रहे । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा संयन्त्र सदस्य बनेका उहाँ पुनःपञ्चकाे अादेशमा तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरी ल्याउन टाउकाको मूल्य रु ५० हजार तोकेको थियो ।
अर्ध भूमिगत अवस्थामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी बनेका उनी विसं २०४७ मा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । दोस्रो बैठकबाट केन्द्रीय आयोजक समिति सदस्य बनेका तिमिल्सिना केन्द्रीय सदस्य हुँदा प्रधानमन्त्री ओली सोही कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । विसं २०४७ मा माले मुस्ताङका सचिव, ०४८ मा नेकपा (एमाले) बागलुङका सचिव, विसं २०५४ मा नेपालगञ्जमा सम्पन्न एमालेको छैटाैँ महाधिवेशनबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदै धौलागिरि अञ्चल इञ्चार्जको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए ।
विसं २०५९ मा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य र विसं २०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका तिमिल्सिना पर्वत जिल्ला संयोजकका रुपमा रहेर काम गरे ।यसैगरी पर्वत जिल्लाको पूर्वजिविस सभापति भएका थिए । काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनपछि पुनःकेन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४१६:२३
मोदीको तस्बिरसहित पाकिस्तानले जलायो भारतको झण्डा, छिटै हुने जवाफी कारबाहीको तयारीमा बस्न चेतवानी !
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि सबै खाले सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय !
हिजो जनकपुर–जयनगर रेलको सफल परीक्षण !
“पार्टी एकता तोड्न प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र बुन्दैछन्”
फेसबुक ट्वीटर बन्द हुने हल्लाको बास्तबिकता के ? संचार मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति